Xukuumadda Djibouti Oo Xukun Ku Riday Sadex Wadaad Oo Ka Tirsanaa Mucaaradka | Araweelo News Network (Archive) -
Djibouti(ANN)Maxkamad ku taal dalka Djibouti ayaa xukun ku ridday wadaado caan ka ah wadankaa, kuwaas oo ka qaybgalay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaa, balse mucaaradooda iyo ka qayb qaadashada ay
doonayeen inay siyaasada ka qayb qaataan ay ka cadhaysiisay xukuumadda Djibouti ee Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku eedeeyay wadaadada ku doonaya inay kusoo gabadaan siyaasada.
Sadexda Wadaad ayaa xabsiga loo taxaabay kadib muran ka dhashay natiijadii doorashada, waxaana shalay lagu riday xukun midkiiba laba sanadood Xadhig adag ah.
Culimadaa oo dalka DJibouti si weyn looga yaqaanay ayaa kala ah Cabdi Raxmaan Suleymaan Bashiir,Cabdi Raxmaan Barkhad Good iyo Giirre Miigaal.
xeer ilaaliyaha maxkamadda DJabuuti Jaamac Suleymaan Cali ayaa Idaacadda VOA-da u sheegay in wadaadada laxidhay ay ku lug yeesheen rabshado waxyeello gaystay oo maalmo ka hor ka dhacay dalka DJabouti. laakiin mucaaradka Dalka Djibouti ee tamarta daran ayaa u arka arrintaa mid lagu cabudhinayo xoriyada iyo xuquuqda muwaadiniinta, isla markaana la doonayo in mucaardka loogu quus gooyo.